ဒို့ဘာသာ (၅) မွဲခြင်း တရားခံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒို့ဘာသာ (၅) မွဲခြင်း တရားခံ
ဒို့ဘာသာ (၅) မွဲခြင်း တရားခံ
Posted by ashinindaka on Aug 24, 2011 in Copy/Paste | 24 comments
ကနောင်မင်းသား ရေမြုပ်ဗုံးလုပ်တာကို စိတ်ကောက်ပြီး ဆွမ်းမဖုံးရာကနေစတာပါဘဲဘုရား
နယ်ချဲ့တွေက ရေတပ်နဲ့ဝင်တိုက် မြန်မာတွေသူ့ကျွန်လက်အောက်ရောက်
ဟုတ်ပုံမရပါဘူး။ မွဲတဲ့အသိဥာဏ်တွေနဲ့ရှင်သန်နေကြလို့မွဲတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ကုန်ကုန်ပြောရင် ဗုဒ္ဓဘုရား ပွင့်ပွင့် မပွင့်ပွင့် မွဲတဲ့အသိဥာဏ်တွေနဲ့ နေရင် မွဲမှာပဲ။ မွဲတဲ့အသိဥာဏ်တွေကို လှန်ထုတ်ပစ် မမွဲပဲနေမှာပဲ။
ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းကို သေချာပြန်ဖတ်စေလိုပါတယ်—ဘုန်းကြီးတွေ ထမင်းတောင် မစားနိုင်ဘူးဆိုတာ လျှောက်ပြောကြတာပါ—–ေ၇မြုပ်ဗုံး လုပ်တော့ အသံထွက်လာတဲ့ အချိန် မှာ ဘုန်းကြီးတွေက –အင်း လူတွေတော့ သေကြေကြတော့မှာပဲ——–လို့ ပဲ ဘုန်းကြီးစကား ပြော၇ုံလေးပါ –နောက် ဆွမ်းစားပါတယ်—–(ဒီနေ၇ာမှာ–အဲ့ဒီအသံထွက်တာကို ကောင်းတယ်လို့ ပြုံးပြုံးကြီး နေ၇မှာလား—-အနည်းဆုံးတော့ –(ဟန်ကိုယ့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ) ဒီစကားက မလွန်ပါဘူး—-) ) မင်းတုံးမင်းကသာ သူ့ ညီ အပေါ် နည်းနည်း စိတ်မချနေလို (သူ့ ထီးနန်းဘယ်လို ၇လဲ —နောက် အိမ်ေ၇ှ အ၇ာ ထားတော့ သူ့ သားတွေနဲ့ဘယ်လို့ေ၇ှာ့ခ်တွေ ဖြစ်ကြလဲ —————)ဖတ်ကြည့်ါကြဦးဗျာာာာာာ——–့ )အလကားနေ၇င်းနဲ့ မင်းတုံးမင်းက မျက်နှာလို မျက်နာ၇ ၀င်ပြီးတော့–တပည့်တော်ပိတ်လိုက်ပါ့မယ်လို့ တာဝန်ခံလျှောက်ခဲ့ လို့့ သူ့ေ၇မြုပ်ဗုံး ကိစ်စ အဆုံး မေ၇ာက်ခဲ့တာပါ–(ဒီနေ၇ာမှာ မင်းတုံးမင်းကြောင့် တိုင်းပြည် ဒီလို ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်——-သူဟာ တကယ့် မင်းကောင်းမှန်း သိပါတယ် ဒါပေမဲ့ သမိုင်းကို သေချာ မဖတ်ပဲနဲ့ ကြားဖူးနားဝ ဟာသ ပုံပြင် ထဲက gossip တွေကို ဖတ်ပြီး တခြားလူတွေပါ အမြင် စောင်းသွားမှစိုးလို့ ပါ –အဲ့ဒီကိစ်စက ကျတော်တို့ သူငယ်တန်းက ပြောတဲ့ ပုံပြင်ပါ——–အခု လူကြီး ဖြစ်တော့ ဖတ်စ၇ာ သမိုင်းစာအုပ်တွေ —အများကြီးပါ(မြန်မာေ၇ာအင်္ဂလိပ်တွေေ ၇းထားတဲ့ ဟာေ၇ာ တစ်ပုံကြီးပါ)
ဒါကြောင့် သူများ ပါးစပ်ဖျား လမ်းမဆုံးမိကြဖို့ အေ၇းကြီးပါတယ်ခဗျာ——–
စောင့်ထိန်းတယ်ဆိုရင် သူဟာ အလိုလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားတာပါဘဲ။ ” အဲလိုအမှန်လားဘုရား တပည့်တော်သိထားတာက အဲလိုလူမျိုးက ကုသိုလ်ရတာပဲရှိမယ် ဗုဒ္ဒဘာသာတော့မဖြစ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ သရဏဂုံသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆီးကပ်မှ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်မယ်လို.ထင်ပါတယ် အဲဒီလူက ကံငါးပါးတော့ထိမ်းတယ်ဒါပေမယ့် အယူအဆက တစ်ခြားအယူအဆနဲ့ဆိုရင်ဗုဓ္ဒဘာသာလို.ပြောလို.မရလောက်ဘူးထင်ပါတယ်
ဒီလောက် နားဝေးမယ် မထင်ဘူး။ ငါးပါးသီလဆိုတာ ဥပမာပြတာပါ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် တရားကိုကျင့်သုံးတာဖြစ်လို့ တရားကို ကိုးကွယ်တာပါဘဲ။
လွန်စွာသင့်မြတ်လှပ၏ အရှင်ဘုရား။ ကပ္ပိယသဂျီး၏အမြင်ကိုလည်း သိလိုလှပါတယ်။ ဆရာ၊ ဒကာ မညီမညွတ်ဖြစ်မည်ကိုတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ်ဘုရား…။ ဒါထက် ငရဲ၊နတ်ပြည်၊ ရှေးနောက်ဘဝ ရှိပါသလား အရှင်ဘုရား။ ဆရာတော့်ကပ္ပိယသဂျီးက မူလကျီလုပ်နေလို့ပါ။ အမှန်တရားအလို့ငှာ နှာစေးချောင်းဆိုး အမြန်ပျောက်တော်မူပါ ဘုရား..။
ဒကာတို့က တယ်အတို့အထောင်တော်သကိုး။ ၂၀၀၄ – ခုနစ်က မလေးရှားကနေ ထိုင်း – ဘန်ကောက်ကို ရထားနဲ့ ခရီးထွက်ဖူးသကွဲ။ ရထားပေါ်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဒကာကြီးက ဂရိနိုင်ငံကတဲ့။ အဲ့ဒကာကြီးက အတော်စပ်စုသကိုး။ သူစပ်စုတဲ့ထဲမှာ ငရဲပြည် နဲ့ နတ်ပြည် ဆိုတာကို ယုံလားလို့ မေးသကွဲ့။ ဒါနဲ့ “ဘာသာတစ်ခုကို တည်ထောင်ချင်သပဆိုရင် ထိုတည်ထောင်သူဟာ ငရဲပြည်နဲ့ နတ်ပြည်ကို အရင်ဆုံး တည်ထောင်ရကြောင်း” ဖြေဆိုခဲ့ဘူးတယ်။
(မှတ်ချက် ။ ဒါဟာ ခုဒီရွာထဲက ဒကာတို့အဖွဲပြောနေတာနဲ့လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။)
အရှင်ဘုရားကလည်း နှာစေးမပျောက်၊ တပည့်တော်ကလည်း အတို့အထောင် ဝါသနာကြီး၊ ခက်တော့နေပြီ။ တပည့်တော် မရမကလိုက်မေးရခြင်းအကြောင်းက ငရဲနတ်ပြည် ရှေးနောက်ဘဝတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးနဲ့ စပ်ဆက်နေလို့ပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ ငရဲနတ်ပြည်သံသရာမရှိ ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီတွေကလည်း သူတို့မှ ဗုဒ္ဓဝါဒီအစစ်လို့ ဆိုနေလေတော့ အရှင်ဘုရားရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ကွဲကွဲပြားပြား သိရရင် ပိုအကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အရှင်ဘုရားက နှာစေးပြနေတော့ ပိုပြီးသို့လောသို့လော ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို အလွန်အကျူး မျက်စိမှိတ် လက်ခံတာ မကောင်းဆိုပေမဲ့ ကိုယ်မမြင်မသိတိုင်း မဟုတ်ဆိုတာလည်း မမှန်သေးပါဘူး။ အရှင်ဘုရား နှာစေးအမြန်ပျောက်ပါစေ..။
Rich ???? Rich in what ????
Poor ??? What is poor????
Measure with what ???? Gold , Money ???
အေဒီ (၁၁-၁၃)ရာစုမှာ ဗုဒဘာသာကိုးကွယ်မှုနဲ့အတူ ပုဂံခေတ်ဟာ ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ခဲ့ပါတယ်..။
လူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်မြင့်မားတာကို ကျောက်စာတွေမှာ ဖတ်ရှုရပါတယ်..။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)လောက်က ဗုဒဘာသာစတင်မှုနဲ့အတူ အိနိယပြည်ဟာ ကမာမှာ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း အတိုးတက်အထွန်းကားဆုံးခေတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ဗုဒဘာသာကို ကူးပြောင်းလာတဲ့ အာသောကဘုရင်ကြီးဟာ ကမာ့အရှေ့တိုင်းအနောက်တိုင်းမှာ လေးစားစရာအကောင်းဆုံးဘုရင်တစ်ပါးပါ..။
ဗုဒဘာသာဟာ လူတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာဖို့ထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့၊ ဘ၀မှာ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်အသက်မွေးဖို့၊ နောက်ဆုံးမှာ သံသရာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့ကို အဓိကထားတာပါ..။
ဒါကြောင့်မို့ ဗုဒဘာာဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းများနဲ့ရော၊ အယူစွဲကြီးမှု၊ မျက်ကန်းအငြင်းပွားမှု၊ ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲမှုများနဲ့ရော သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ထင်ပါကြောင်း…။
Thank you Thanlwinoo , That is what I believe.
ဗုဒဘာသာဟာ လူတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာဖို့ထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့၊ ဘ၀မှာ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်အသက်မွေးဖို့၊ နောက်ဆုံးမှာ သံသရာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့ကို အဓိကထားတာပါ..
Therefore , I ask the question:- because of this .ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တိုင်းပြီတွေ ဘာလို့ ချမ်းသာနေပြီး
အသားမဲလို့၊ ဖြူလို့ဆိုပြီး ဘက်လိုက်လေ့ မရှိပါဘူး။””
ကျွန်တော်သိသလောက် အကြမ်းဖျဉ်းပြောရရင်.. (မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့)
ပုဂံခေတ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ ခေတ်ပြိုင်ဥရောပ၊ အာရှနိုင်ငံအများစုရဲ့ရှေ့မှာရှိခဲ့တယ်..။
နောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာ သက်ဦးဆိုင်ပိုင် ရှင်ဘုရင်တွေ အမြင်မကျယ်၊ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှု၊ ဥရောပတိုက်မှာလို Renaissance (အသိပညာအတတ်ပညာပြန်လည်ထွန်ကားမှု)မရှိ၊
ဥရောပတိုက်မှာလို စက်မှုတော်လှန်ရေးမဖြစ်ခဲ့လို့ စက်မှုမထွန်းကား၊
ဥရောပတိုက်မှာလို ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဝါဒမဖြစ်ခဲ့လို့ သယံဇာတ၊ ကုန်ကြမ်းဈေးကွက်တွေမရှာဖွေနိုင်တဲ့အပြင် (ဗုဒဘာသာနိုင်ငံအများစုဟာ) နယ်ချဲ့ကျွန်ပြုခံရပြီး ကိုယ့်သယံဇာတတွေ သူများပေးခဲ့ရပါတယ်..။
မင်းတုန်းမင်းခေတ်မှာ (ဂျပန်မေဂျီခေတ်ပြိုင်) နိုင်ငံခေတ်မှီအောင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း
ခေတ်မီအတွေးအခေါ်ရှိတဲ့သူနည်း၊ အမြင်ကျဉ်း အာဏာကိုဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ယူလိုတဲ့လူတွေကြောင့်
နှောင့်နှေးခဲ့ပြီး မကြာခင် သူ့ကျွန်ဘ၀ကို လုံးဝကျရောက်သွားပါတယ်.။
ကိုလိုနီခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်ကအဆီအနှစ်စားပြီး အရိုးအရင်းနဲ့ပြန်လုပ်ပေးတာတောင် တိုင်းပြည်ဟာ အရှေ့တောင်အာရှအဆင့်မှာ ရှေ့တန်းမှာရှိပါတယ်..။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရာမှာလည်း ကမအဲ့ဒီခေတ်က ပေါ်ထွန်းစတိုင်းပြည်တွေ(ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်)ထက် အခြေခံကောင်းသော်လည်း စစ်တပ်(ခေါင်းဆောင်တစ်စု)က အာဏာသိမ်းပြီး တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ ပြည်သူတွေလည်းမွဲခဲ့ပါတယ်..။
ကျန် (ထေရ၀ါဒ) ဗုဒဘာသာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဆိုရင် တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှု၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေခံဥပဒေမရှိလို့ (သို့) အားနည်းလို့၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းချို့တဲ့လို့၊ နိုင်ငံသားတွေ အသိပညာနည်းသေးလို့လို့ ထင်ပါတယ်..။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံ၊ အခြေခံကောင်းတဲ့နိုင်ငံ၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေ အသိပညာ၊ စိတ်ဓါတ်ကောင်းမွန်ရင် မကြာခင်တိုးတက်ချမ်းသာမှာပါ..။
ဒါတွေက လူတွေရဲ့အရေး (လောကီရေး)သက်သက်ပါ..။
ဗုဒဘာသာကတော့ လူတွေကို ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုကို နည်းလမ်းပြရုံပါဘဲ။
အတင်းအဓမဘယ်သူ့ကိုမှ မလုပ်ခိုင်းပါဘူး..။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မကယ်တင်ပါဘူး..။
တိုင်းပြည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းဟာ လောကီရေးသက်သက်ဘဲလို့ အတိုချုပ်ပြောချင်ပါတယ်…။
နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွါးရေးတွေမှာ သူတို့တတွေကျင့်သုံးနေတာက
Thanksalot Thanlwinoo . “ဘာသာနဲ့မဆိုင် လူနဲ့ဆိုင်ပါတယ်..။”
ဆရာတော်က.. နိုင်ငံတကာဗဟုသုတနဲ့.. အမြင်ကျယ်တယ်..
ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုလည်း.. စာရွက်နဲ့မဟုတ်.. တကယ်တက်ပြီး..တတ်ပြီးရထားတော်မူတယ်..။
ရဟန်းတပါးအတွက်ပေးထိုက်တဲ့.. .. ထိုက်သင့်တဲ့.. အပြန်အလှန်လေးစားမှု မပေးကြတာတွေကြောင့်လည်း ပါမယ်ထင်တယ်…။
( ဆရာတော်ဒီစာဖတ်မိရင်.. (အဆင်ပြေပါရင်). .ပြန်ကြွရေးပေးစေလိုတော်မူကြောင်းပါဘုရား)
ဒကာခိုင်ရေ။ ဒကာခိုင်ပြောသလို ကိုယ်သိတာလေးတွေ ကိုယ်ထင်တာလေးတွေ ဒီမှာ တင်တော့ တင်ချင်တယ်။ မှား တာ မှန်တာကတော့ စာဖတ်ပရိသတ်က စဉ်းစားယူပေါ့လေ။ သို့သော်လဲ စာကို သေချာ ဆုံးအောင် မဖတ်ပဲနဲ့ တစ်ပိုဒ်လောက်ဖတ်ပြီး အရမ်းကာရော မန့်တဲ့သူတွေ တွေ့ရတော့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒကာခိုင်ရဲ့ သတိတရ ဖိတ်ခေါ်မှုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆက်တင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဆရာတော်ဘုရား- တပည့်တော့ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမယ့် မိရိုးဖလာအဆင့်လောက်ပဲ ရှိတာမို့ ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင် မှန်မှန်ကန်ကန် ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းအားနည်းလို့…
ပြင်ပလောကမှာပဲ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ တရားတော်တွေကို နည်းနည်းပါးပါး နာဖြစ်တာကလွဲပြီး ဒီဆိုဒ်ထဲမှာဆိုရင် ဘာသာရေးစာပေတွေကို မဖတ်ဖြစ်သလောက် ဖြစ်သွားပါတယ်။
အခုမှ သဂျီးရေးတာရော၊ ဆရာတော်ရေးတာကြောင့်ပါ ဒီပိုစ့်ကို ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။
ဆရာတော်ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြီး တရားသိသူနဲ့ တရားရှိသူလို့ သိရှိနားလည်သွားကြောင်း
ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် လျှောက်ထားအပ်ပါသည် ဘုရား။
မောင်ဂွ တို့ ပစ်စုပ်ပန် သမားတွေ ဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်။
သူတို့က ထေရ၀ါဒ ကြောင့်ချည်းလုပ်နေပြီး
မိမိကိလေသာအလိုနဲ့ ပြင်ဆင်လုပ်ထားတဲ့ ပစ်စုပ်ပန် မိုးပြာဝါဒ မှသာလျှင် တိုင်းပြည်တိုးတက်မယ် လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းမယ် ဆိုလား
အရှင်ဘုရားပြောသလိုဘဲ တို့တစ်တွေလည်း သီလကိုတတ်နိုင်သလောက်စောင့်ထိန်းပြီး ဘုရား တရား သံဃာကို ရင်ထဲနှလုံားးထဲကနေကိုးကွယ်ရာဖြစ်ဆည်းကပ်ကြရအောင်နော်